Ninka wanaagsan waa mdka ka ilaalsha xaaskiisa erayada xun xun ee niyaddeeda jabin kara.
Ninka wanaagsan waa midka dhagaysta fikradaha xaaskiisa, qadariyana.
Ninka wanaagsan waa midka mar walba ka ilaalsha xaaskiisa cidlada una sheega in ay tahay mida ugu horaysa qalbigiisa.
Ninka wanaagsan waa mid mar walba astura Ceebta xaaskiisa ileen kuligeen ceeb waa inaga wada dhacdaayee.
Ninka wanaagsan waa kan marka uu guriga xaaskiisa soo gala, iska hilmaamo wax walba oo uu bannaanka ku ahaa, ogaadana in markan uu guriga xaaskiisa joogo, kuna qadariyaa sidaa isaga oo aan samaynayn wax walba oo keeni kara Qilaaf iyo is xag xagasho.
Ninka wanaagsan waa midka mar walba dareensiya xaaskiisa, in ay u qalanto in ay noqoto xaaskiisa.
Ninka wanaagsan waa midka mar walba u samra xaaskiisa, iyadoo aan wada ognahay in dumarku feer qaloocan laga abuuray, oo mararka qaarkood hadala dareenkiisa wax u dhibi kara ku hadaaqan.
Ninka raga ah waa midka marka xaaskiisu ay uga baahantahay taageero, ku garab istaagaa.
Ninka wanaagsan waa midka ka qabta qaladaadka xaaskiisa marka ay samaynayso.
Ninka wanaagsan waa midka ka yeesha xaaskiisa gacantiisa midig, ogaadana in ay tahay lamaanta dhabta ee aan booskeeda la buuxin Karin.
Qof aan xishoon sharaf ma lahan saa Xoolaha wax uu uga duwanyahay ayaaba jirin, dunida aan ku noolnahay hadda waxay u muuqata in ay usii xuubsiibanayso xishoodd la’aanta, wax walba oo xishood la’aan ahna ay maanta iska noqdeen Casri, oo qofkii xishooda la leeyahay waa dambeeyaa, ama wali horey uma socon.
Marka walaalayahayga Muslimka ahow ama Soomalida aan isla nahay, aan u laabano xishoodkeenii, marka aan sidaa leeyahay wuu dareemi karaa qof waliba heerka ay maanta gaartay dhaqan xumadeena, qof waliba wax ha ku qiimeeyo meesha uu uga noolyahay aduunkan, imisa Soomali ah ayaa joogta oo ka tagtay xishoodkoodi iyo dhaqankoodi ku salaysnaa Islaanimida.
Xishood la’aan waa Diin la ‘aan
diinteena islaamka dhowr meelood ayay uga hadashay xishoodka,Rasuulkeena csw wuxuu yiri